NAV oo dadkii lacagaha hormariska ah helay, kasoo ceshan doonto. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub NAV oo dadkii lacagaha hormariska ah helay, kasoo ceshan doonto.
NAV oo dadkii lacagaha hormariska ah helay, kasoo ceshan doonto.
Laga bilaabo Talaadada soo socoto ee isbuuca danbe, xafiiska shaqada ee NAV ayaa waraaqo lacag soo celin ah u diri doono dadkii lacagaha hormariska ah ka helay NAV, bilowgii xanibaada xanuunka Corona-virus.
Xafiiska shaqada NAV ayaa bilowgii xanibaada xanuunka Corona-virus bilaabay adeeg cusub oo dadka xaalada dhaqaale ee adag kujiray, ay ku dalban kareen lacag horumaris ah, kahor inta aan laga shaqeyn codsiga lacagta “dagpenger-ka”. Waxaa fursadaas ka faa´iideystay oo lacago horumaris ah dalbaday dad gaaraya 180.000 qof.
NAV ayaa dhowr mar oo hore dib u dhigtay go´aanka lacagta dib loogu soo celinayo dadkii horey loo siiyay, iyada oo la qiimeynayo xaalada dhaqaale xumo ee soo wajahday dadka shaqooyinka laga fariisiyay ama shaqa la´aantu ay ku dhacday.
Xafiiska shaqada ee NAV ayaa dhanka kale sheegay in dadka ugu horeeyo ee warqadaha dalabta soo celinta loo diri doono ay noqon doonaan dadka weli lacagta “dagpengerka” ah ka hela NAV, iyaga oo sheegay inay 15% ka jiri doonaan lacagta la siiyo dadkaas, si ay usoo gudaan lacagtii horumariska aheyd oo ay qaateen.
Isku cel-celis 180.000 qof ee lacagta horumariska ah helay, ayaa NAV ka qaba 20.000 kr.
Xigasho/kilde: Nå begynner Nav å kreve tilbake forskudd på dagpenger.
Previous articleHøyre: argagaxisada halagu xukumo 50 sano oo xabsi ah!.
Next articleNorway oo walaac xoogan ka muujisay xeer ay baarlamaanka Soomaaliya diideen.
UNE iyo Hassan oo maanta maxkamada isaga horyimid.
Keydka NorSom Velg måned juni 2021 (25) mai 2021 (48) april 2021 (67) mars 2021 (70) februar 2021 (51) januar 2021 (55) desember 2020 (50) november 2020 (67) oktober 2020 (75) september 2020 (54) august 2020 (82) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (61) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (39) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (109) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)
Norsomnews - 14. juni 2021 0
NAV ayaa ku tiri: Uma baahnid koronto ee raadso birta dhuxusha(grill)...